I-Sørlandskos! - I-Airbnb
Indlu yamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguGeir Arve
UGeir Arve yi-Superhost
I-Cozy Sørlandshus, indawo ekwindawo esemaphandleni, kufutshane nolwandle, i-Blindleia kunye neendawo ezijonge ezantsi. Ilanga nelingagqitywanga. Iihektare zesakhiwo. Iindawo zokuqubha ezikufutshane. Ikhitshi, igumbi lokuhlala kunye negumbi lokuhlambela kumgangatho wokuqala zisandul 'ukulungiswa. Le ndlu inemigangatho emihle.
Imizila yokunyuka intaba ekufutshane. Iziko leholide le-Skottevig, elikwindawo ekufutshane nomgama wokuba ungahamba ngeenyawo, unokunceda ngevenkile, iindawo zokutyela, ipuli yokuqubha kunye nolwandle olunesanti = 500 m. Indawo yezilwanyana enomhlaba wokuhlamba = iikhilomitha eziyi-18.
I-Kristiansand kunye ne-Aquarama = 20 km. I-Lillesand = 20 km
Umbuki zindwendwe ngu- Geir Arve
Umnini-ndlu uhlala kwiikhilomitha eziyi-18 ukusuka kwiSummer House kwaye uyafumaneka ngomyalezo, ngenombolo, ngefowuni okanye nge-imeyile.